Fonosary maimaimpoana ho fampiasana sy fahafinaretanao | Famoronana an-tserasera
Endritsoratra 10 maimaim-poana ho an'ny fampiasanao sy ny fahafinaretanao
Iray amin'ireo loharanom-pahalalana endrika sary be mpitady indrindra ny endritsoratra maimaim-poana. Fantatsika rehetra ny herin'ny fampiasana loharano iray na hafa, izay manome ny maha-izy azy ny endrika manokana hanavahana azy amin'ny hafa. Izany no antony namoahanay amin'ny Creativos Online ny sasany indraindray lahatsoratra iray hafa miaraka amina endritsoratra maimaim-poana hahafahanao misintona.
Manaraka dia ho hitanao Endritsoratra 10 maimaim-poana samy hafa be amin'ny tsirairay: matotra, mavesatra, maivana, tsy ara-potoana, ankehitriny, antitra ... Ankafizo izy ireo.
Fandraisana 10 maimaim-poana
Asabotsy: endri-tsoratra sans-serif misy lanjany sy ny fampiasana azy maimaim-poana, na ho an'ny asa manokana na ara-barotra. Ny typeface dia misy ligises, maody mahazatra sy italiana ary glyph.
Brig: typeface izay, toy ilay teo aloha, dia miasa tsara amin'ny lohateny sy lahatsoratra fohy amin'ny paositra. Manambatra typology roa izy io: ny "normal" sy ny "alternate".
manan-tsaina- Sans-serif typeface mety ho an'ny lohateny kely na lahatsoratra tsy ara-potoana.
origram: typeface aingam-panahy, mazava ho azy, na amin'ny Origami na tangrams, izay ny fototra dia octagon. Izy io dia endri-tsoratra mety indrindra ampiasaina amin'ny habe lehibe sy lahatsoratra fohy dia fohy.
Mampanantena: ity typeface ity dia natao manokana hampiasaina amin'ny sanganasa izay fanatanjahantena no sahaniny.
VONINAHIN'NY BRAIN- Fonta manana fahazoan-dàlana mamela antsika hampiasa azy io hampiasaina irery. Ho fampiasana ara-barotra dia tsy maintsy mifandray izahay fifandraisana amin'ny mpamorona.
Abraham Lincoln- Nahazo aingam-panahy avy amin'ny filoham-pirenena amerikana faha-16 sy ny fanambaràna tamin'ny taompolo 1800, ity dia endrik'olona iray misy endrika mifanohitra antonony. Raha te hampidina azy io dia tsy maintsy mampiditra vola amina faritra mety amin'ny pejy isika (izay afaka manomboka amin'ny 0 XNUMX ka hatramin'ny maro araka izay irina) ary tsindrio ny fampidinana.
Adam's Regular: maimaim-poana ho an'ny fampiasana manokana sy ara-barotra, dia typeface manana toetra be dia be ary asaina mampiasa habe be.
Muchacho: fandoavam-bola amin'ny bitsika, azontsika atao ny mampiasa ity endri-tsoratra maimaimpoana ity hampiasainay manokana. Raha te hampiasa azy amin'ny asa ara-barotra isika dia ampy ny mividy ny fahazoan-dàlana amin'ny € 10 fotsiny.
Dimy minitra- typografika mety amin'ny sketsa, tantara an-tsary ary lahatsoratra tsy ara-potoana. Manoro hevitra anao ny handinihana ny habeny faran'izay kely indrindra ahafahana mamaky teny tsara, satria very maranitra amin'ny mizana kely.
Fanazavana fanampiny - Bitsika 5 maimaim-poana (VI), Bitsika 5 maimaim-poana (III),
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » loharanom-baovao » Endritsoratra 10 maimaim-poana ho an'ny fampiasanao sy ny fahafinaretanao
yaneisi dia hoy izy:
Mamaly an'i yaneisi